Nagarik Shukrabar - छाडा टिकटक !
शनिबार, ०७ जेठ २०७९, ०२ : ४६
मङ्गलबार, २० साउन २०७७, ११ : २९ | पुष्पा थपलिया
केही दिनअघि सार्वजनिक यातायातमा व्यक्तिगत दुरी कायम राखिरहेका दुई महिलाको वार्ता यस्तो थियोः
‘आप्पोई, तिम्लाई टिकटकबारे थाहै छैन त ? ढाँटेको होला !’
नजिकै बसेकी अर्की महिलाले ठूलै कुरा गुमाएको भाव व्यक्त गरिन्। त्यसपछि ती महिलाले टिकटकको बखान सुरु गरिन्।
अर्की महिलाको अनुहार भने निन्याउरो थियो किनभने यतिधेरै फाइदा भएको टिकटकबारे उनले थाहै पाएकी थिइनन्।
मान्छेको नजरमा पर्न र भाइरल हुन प्रयोगकर्ताले केकस्ता वितण्डा र उदण्डता प्रदर्शन गर्छन् भन्ने उदाहरण हेरौँः
एउटी सुन्दरी कम्मर मर्काउँदै टाढाबाट आउँछिन्, र भन्छिन्, ‘दाजु ढाल दिनुस् त !’
यताबाट तुरुन्तै सुन्दरीले जवाफ दिन्छिन्, ‘ढाल दिनुस् न भनेको ! चौतारीमा थकाइ मारेको भए पो यो हरियालीको महत्व थाहा हुन्थ्यो त !’
संवाद सुन्दा त सामान्य नै छ तर प्रसंगसँगै शारीरिक हाउभाउले भिडियो विचित्रको अश्लील बन्न पुग्छ। मानिसहरु दोहो-याई–तेहो-याई भिडियो हेरेर हाँसिरहन्छन्। अझै कमेन्ट हेर्न मात्रै आको भन्नेहरुको लर्को पनि टन्नै हुन्छ त्यहाँ। यही संवाद भएको भिडियो मात्रै त्यहाँ सयौं छन्। त्यत्ति नै संख्यामा नयाँ हाउभाउसहित भिडियो ड्वेट पनि देखिन्छ।
यताबाट निकै निष्फिक्री आवाजमा भनिन्छ, ‘अँ भन् मु...।’
केही समय मौनता छाउँछ अनि फेरि जिब्रो टोक्दै भनिन्छ, ‘अँ भन् न, मु...।’
यसमा पनि संवाद झट्ट सुन्दा उति साह्रो अश्लील लाग्दैन तर भिडियो र हाउभाउले निकै भद्दा सुनिन्छ। टिकटकले देखाएअनुसार, यो संवादमा पनि ६ सयभन्दा धेरै भिडियो बनेका छन्।
यी त भए लेख्न र सुनाउन मिल्ने खालका संवादका कुरा। एउटा शब्दको अर्को अर्थ लाग्ने अभिनय त कत्ति देखिन्छ, लेखाजोखा नै छैन। त्यसमाथि केटाहरुले अजिबको मेकअप गरेर भिडियो बनाउने अनि केटीहरुले ह्वाङ्ग र पारदर्शी लुगा लगाएर भिडियो बनाउने चलन पनि टन्नै छ।
नग्न र अस्लिल भिडियोमा धेरै इंगेज
कसको भिडियो देखाउने, कसको नदेखाउने जस्ता कुरा टिकटककै हातमा हुन्छ। भारतमा टिकटक प्रतिबन्ध लगाइएपछि नेपाली टिकटकर्सका भिडियोमा तुलनात्मक रुपमा नौटंकी देखाएको भिडियो र अश्लील हर्कतका सामग्रीमा धेरै मानिसहरु इंगेज गराएको देखिन्छ।
उनको निजी अनुभव छ, ‘मैले एउटा आँखा र ओठ मात्रै देखाएर भिडियो बनाएकी थिएँ। ओठ अलि सेक्सी पाराले टोक्देको मात्रै के थिएँ, अहिलेसम्मकै धेरै भ्युज त्यसैले पाएको छ।’
टिकटकमा निकै सक्रिय कलाकार किरण केसीले पनि यही कुरालाई जोड दिँदै भने, ‘मेरो एउटा डाइलग निकै हिट भएको थियो। त्यसमा मैले गीतमार्फत, मायाँको बारीमा जोतेर बिउ हाल्ने धोको छ टाइपको भनाइ राखेको थिएँ। धेरैले त्यसमा थरीथरीका अभिनय गरेका छन् र ती निकै अश्लील छन्।’
किन त्यस्तो अश्लील कुरा बोलेको त भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘मैले त कला प्रयोग गरेको नि ! कला र अश्लीलतामा त फरक छ नि !’
टिकटकले मानसिक रुपमा थकान दिने पनि अर्याल बताउँछन्। उनले भने, ‘हामी टिकटकमा जति समय पनि बिताउन सक्छौं तर जब समय ढल्किन्छ, बेकारमा मैले समय खेर फालेँ भन्ने मनमा एक किसिमको अपराधबोध हुन्छ। आफ्ना महŒवपूर्ण काम थाँति राखेर चलाएको टिकटकले क्षणिक मनोरञ्जन त दिन्छ तर मानसिक रुपमा भने निकै नराम्रो असर पार्ने उनको भनाइ छ।
टिकटकका धेरै समस्या भए पनि मूलतः यसले लामो समयसम्म दिमागमा असर परिराख्ने अर्याल बताउँछन्। बालबालिका रिसाहा हुने, अधैर्य हुने र आवेशमा आएर जस्तोसुकै अपराधमा संलग्न हुनसक्ने उनको भनाइ छ।
चीनले बनाएको प्रख्यात एप भए पनि यो चीनमा नै चल्दैन। बालबालिका तथा गर्भवती महिलाका भिडियो बनाएको र अश्लीलता फैलाएको आरोपमा चीनमा यो प्रतिबन्धित छ। बरु चीनका लागि टिकटकजस्तै छुट्टै एप दोउयिन चल्तीमा छ। टिकटक निर्माता कम्पनी बाइट डान्सले नै दोउयिन पनि बनाएको हो।
यसैगरी चीनसँगै भारत, अमेरिका र इण्डोनेसियामा पनि टिकटकलाई प्रतिबन्ध लगाइएको छ। इण्डोनेसियामा अश्लीलता फैलाएको र बालबालिकाको मस्तिस्कमा नराम्रो असर गरेको भन्दै टिकटक ब्याण्ड गरिएको हो भने भारत र अमेरिकामा राष्ट्रिय सुरक्षामाथि खतरा रहेको भन्दै प्रतिबन्ध लगाइएको हो।
त्यसो त टिकटकको बेफाइदा मात्रै हैन, फाइदा पनि रहेको जुम्ल्याहा दिदीबहिनी प्रिस्मा र प्रिन्सी बताउँँछन्। टिकटकले गर्दा नै उनीहरुले अभिनय र मोडलिङ क्षेत्रमा प्रवेश पाएको भन्दै प्रिस्माले भनिन्, ‘टिकटक नभएको भए, आज सम्पूर्ण नेपालीहरुले हामीलाई चिन्थेनन् अनि हामीले कला क्षेत्रमा पाइला सार्न पनि पाउँथेनौं होला।’
तर यस्तो अवसर पाउने भने निकै कम छन्। सबैभन्दा ठूलो कुरा चाहिँ यसबाट फैलिने अश्लीलता र कुप्रभावको अहिलेसम्म नेपालमा कुनै छलफल, अध्ययन भएको छैन र यो सबैभन्दा खतरनाक कुरा भएको अर्याल बताउँछन्।